Search by Author Name: -- Search by Author -- Chan Myae Emily Goldie Kyaw Laura Cho (Career Coach) ကိုထွန်း(ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်) ကျော့ကေခိုင် ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ခင်အေးချမ်း ဇင်ဖြိုးပိုင် (MESI) ဇာနည် (My Way!) ဇီဝစိုး ညီထွဋ် ညီလင်းနိုင် တိုးတက်မေ ထက်ကျော် ထိန်လင်းကျော် (HR) ဒေါက်တာစိမ့် ဒေါက်တာထွန်းဝင်း ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ဒေါ်စန်းစန်း B.Sc (Geology), DIL. DL ဒေါ်မော် (HR) နန်းကူးကူးလှိုင် M.A (English, YUFL) နီလာဝင်း နေသစ် (MDY) မင္းခန္႕ မင္းေခါင္ (Amara) မင်းနိုင် (ရွှေဘို) မင်းအောင်မင်း မေမိုးကဗျာမောင် မောင်မောင်မြင့်သိန်း (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ရာသက်ပန် (သစ္စာပွင့်ပန်းလန်းရာမြေ) လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ) လှဘုန်းအောင်(HR Practitioner) လှိုင်ထွေး ဝန်းလဲ့လဲ့ဇော် သူရထိုက် အဂ္ဂ အဖြူရောင် အလယ္လူ အုန်းဝမ် အောင်ဖြိုးလတ်(Right & Justice) အောင်သစ် အေးမြတ်မြတ်သူ (သူ့ထက်ကဲ) ဥကၠာျမင့္ ဦးလှမြင့် (မားကက်တင်း) ဦးအောင်သန်း ဦးအောင်သန်း ေစာကယ္ရီဝင္း (KC Myanmar) ေမာင္ျမင့္မုိရ္ (OMEGA Counsltancy) ေအာင္ခိုင္ (မီးအိမ္ရွင္)
ဘဝမှာ အောင်မြင်ပြီး ထိပ်ဆုံးကိုရောက် ချင်သူများအတွက် အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက် ချက် Secret factors of Success ဖြစ်တဲ့ TOP Factors လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကျပြီးလမ်း ပျောက်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ယခုတင်ပြမယ့် TOP Factors ‌လေးအတိုင်း သင့် ဘဝကို ပြန်လည်ကြိုးစား တည်ဆောက်ကြည့်ပါ။
အောင်မြင်မှုထိပ်ဆုံးသို့ မရောက်ခဲ့ရင်တောင် ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အကျိုးရလဒ်တစ်ခုကို မျက်ဝါးထင်ထင် ရရှိခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကဲ..ခုပဲ လေ့လာ ကြည့်ရအောင်ဗျာ..TOP Factors ရဲ့ ပထမဆုံး ှSecret Factor လေးကတော့...
Time ဆိုတဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချ တတ်ခြင်းပါပဲ။ မှန်ပါတယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်တဲ့ သူ ဖြစ်ချင်ရင် အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးချ တတ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ သူတိုင်းဟာ အချိန်ကို ဖြုန်းလေ့မရှိကြပါဘူး။ တကယ်တော့ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဘဝဆိုတာ မိမိ တို့အညီအမျှ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တစ်နေ့တာရဲ့ ၂၄နာရီကို ဘယ်လိုအသုံးချသလဲဆိုတာပေါ် မူတည် ပြီးပြောင်းလဲသွားကြပါတယ်။ ဘယ် လောက်ပဲ စိတ်ဓာတ်ကျနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဒုက္ခရောက်နေပါစေ၊ အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံး ချပြီး အချိန်မီ ပြန်လည်ကြိုးစား နိုးထကြည့်ပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက် ချက်ထဲမှာ အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိ ကောင်းမွန်စွာ စီမံအသုံးချတတ်ခြင်းဟာ ထိပ်ဆုံးကပါဝင်နေ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
TOP Factors ရဲ့ ဒုတိယ TOP Factors လေးကတော့..
OPPORTUNITY ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကို ဖန်တီးရယူခြင်းပါ။ အချိန်ဆိုတာကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနေသူတစ်ယောက်ဟာ တခြားသူတွေ ထက် အခွင့်အရေးကို အမြဲတမ်းကြိုမြင်နေတတ် ပြန်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ အခွင့် အရေးဆိုတာကို အချိန်မှီ အမိအရ ရယူအသုံးချ နိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတတ်ပြန်ပါတယ်။ တချို့သူ တွေပြောနေကျ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ ]]အခွင့် အရေးဆိုတာ နှစ်ခါပြန်မရဘူး}}ဆိုတဲ့ စကားပါ။ မှန်သင့်သလောက် မှန်တယ်ထင်ရပေမဲ့ ကျနော့် အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီစကားကိုသိပ်သဘော မတွေ့လှပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အခွင့်အရေး ဆိုတာထိုင်စောင့်ပြီး မျှော်နေရမယ့်အရာ မဟုတ် ဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရယူရမယ့် အရာလို့ ယုံကြည်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲ၊ အတားအဆီးတွေ ရှိနေပါစေ အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး ဥဘျအခေူန ဆိုတဲ့ အခက်အခဲကို ဥစစသမအကညငအပ ဆိုတဲ့ အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ကြိုးစား နိုးထသင့်ပါတယ်။
Plan ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ချ ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်းပါ။ မှန်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ လူတိုင်းမှာ ဏူညေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ Plan ရှိမှ Goal ကို သိပါမယ်။ ရည်မှန်းချက်ဆိုတာရှိမှ လူဖြစ်ရတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာမဟုတ်ပါလား။"A person withoutagoal is likeaboat withoutapaddle" ဆိုသလိုပါပဲ။ ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူဟာ တက်မပါတဲ့လှေနဲ့တူပြီး ဘဝရေလှိုင်းကြားမှာ မျောချင်ရာမျောနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘဝမှာ အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်ရင် ရည်မှန်းချက်(Goal) ရှိရမှာဖြစ်ပြီး ဒီရည်မှန်းချက်ကို အရယူနိုင်ဖို့ Plan ဆိုတာဟာလည်း ကောင်းမွန်ဖို့ အရေးကြီး လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ တင်ပြရရင် ဘဝမှာအောင်မြင်ပြီး ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ချင်ရင်။
နံပါတ်တစ်။ ။ Time (အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချ တတ်ပါစေ။)
နံပါတ်နှစ်။ ။ Opportunity (အခွင့်အလမ်း တွေကို ဖန်တီးအသုံးချတတ်ပါစေ။)
နံပါတ်သုံး။ ။ Plan ရည်မှန်းချက်ကို အစီ အစဉ်ချ ရယူတတ်ပါစေ။)
အောင်ဖြိုးလတ်(RIGHT & JUSTICE)
ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ၿပီး ထိပ္ဆုံးကိုေရာက္ ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ခ်က္ Secret factors of Success ျဖစ္တဲ့ TOP Factors ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။
တကယ္လို႔သင္ဟာ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီးလမ္း ေပ်ာက္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ယခုတင္ျပမယ့္ TOP Factors ‌ေလးအတိုင္း သင့္ ဘဝကို ျပန္လည္ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္ၾကည့္ပါ။
ေအာင္ျမင္မႈထိပ္ဆုံးသို႔ မေရာက္ခဲ့ရင္ေတာင္ ထူးျခားဆန္းျပားတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ရရွိခံစားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ကဲ..ခုပဲ ေလ့လာ ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ..TOP Factors ရဲ႕ ပထမဆုံး ွSecret Factor ေလးကေတာ့...
Time ဆိုတဲ့အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ် တတ္ျခင္းပါပဲ။ မွန္ပါတယ္။ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ သူ ျဖစ္ခ်င္ရင္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ် တတ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ သူတိုင္းဟာ အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းေလ့မရွိၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဘဝဆိုတာ မိမိ တို႔အညီအမွ် ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ တစ္ေန႔တာရဲ႕ ၂၄နာရီကို ဘယ္လိုအသုံးခ်သလဲဆိုတာေပၚ မူတည္ ၿပီးေျပာင္းလဲသြားၾကပါတယ္။ ဘယ္ ေလာက္ပဲ စိတ္ဓာတ္က်ေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဒုကၡေရာက္ေနပါေစ၊ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသုံး ခ်ၿပီး အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ႀကိဳးစား ႏိုးထၾကည့္ပါ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ခ်က္ထဲမွာ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံအသုံးခ်တတ္ျခင္းဟာ ထိပ္ဆုံးကပါဝင္ေန တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
TOP Factors ရဲ႕ ဒုတိယ TOP Factors ေလးကေတာ့..
OPPORTUNITY ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးကို ဖန္တီးရယူျခင္းပါ။ အခ်ိန္ဆိုတာကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ေနသူတစ္ေယာက္ဟာ တျခားသူေတြ ထက္ အခြင့္အေရးကို အၿမဲတမ္းႀကိဳျမင္ေနတတ္ ျပန္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြဟာ အခြင့္ အေရးဆိုတာကို အခ်ိန္မွီ အမိအရ ရယူအသုံးခ် ႏိုင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူ ေတြေျပာေနက် စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ ]]အခြင့္ အေရးဆိုတာ ႏွစ္ခါျပန္မရဘူး}}ဆိုတဲ့ စကားပါ။ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္တယ္ထင္ရေပမဲ့ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒီစကားကိုသိပ္သေဘာ မေတြ႕လွပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ အခြင့္အေရး ဆိုတာထိုင္ေစာင့္ၿပီး ေမွ်ာ္ေနရမယ့္အရာ မဟုတ္ ဘဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးရယူရမယ့္ အရာလို႔ ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ပဲအခက္အခဲ၊ အတားအဆီးေတြ ရွိေနပါေစ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ၿပီး ဥဘ်အေခူန ဆိုတဲ့ အခက္အခဲကို ဥစစသမအကညငအပ ဆိုတဲ့ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ႀကိဳးစား ႏိုးထသင့္ပါတယ္။
Plan ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ခ် ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းပါ။ မွန္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူတိုင္းမွာ ဏူေညဆိုတာ ရွိပါတယ္။ Plan ရွိမွ Goal ကို သိပါမယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာရွိမွ လူျဖစ္ရတာ အဓိပၸာယ္ရွိမွာမဟုတ္ပါလား။"A person withoutagoal is likeaboat withoutapaddle" ဆိုသလိုပါပဲ။ ရည္မွန္းခ်က္မရွိတဲ့သူဟာ တက္မပါတဲ့ေလွနဲ႔တူၿပီး ဘဝေရလႈိင္းၾကားမွာ ေမ်ာခ်င္ရာေမ်ာေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့သူျဖစ္ခ်င္ရင္ ရည္မွန္းခ်က္(Goal) ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို အရယူႏိုင္ဖို႔ Plan ဆိုတာဟာလည္း ေကာင္းမြန္ဖို႔ အေရးႀကီး လိုအပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တင္ျပရရင္ ဘဝမွာေအာင္ျမင္ၿပီး ထိပ္ဆုံးကို ေရာက္ခ်င္ရင္။
နံပါတ္တစ္။ ။ Time (အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ် တတ္ပါေစ။)
နံပါတ္ႏွစ္။ ။ Opportunity (အခြင့္အလမ္း ေတြကို ဖန္တီးအသုံးခ်တတ္ပါေစ။)
နံပါတ္သုံး။ ။ Plan ရည္မွန္းခ်က္ကို အစီ အစဥ္ခ် ရယူတတ္ပါေစ။)
ေအာင္ၿဖိဳးလတ္(RIGHT & JUSTICE)
အလုပ္ခဏခဏခုန္တာ လစာ ၂ ဆ တိုးေစသတဲ့လား
ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၀)ချက်
အမွတ္ ၂၁/၂၃ ဒုတိယထပ္ (၅၂)လမ္းေအာက္ဆုံးဘေလာက္၊ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမဳိ႕နယ္။ 01-9010493, 09-404041405, 09-404041406,
09404040231, 09-5142331 24jobs.com@gmail.com
Jobs in Agencies
Copyright © The Opportunity Journal 2020. All right reserved. Site Powered By Grip Technology
You have been used of limited CV download. Please contact to Administrator